Global Voices teny Malagasy » Iraniana Mpanao Gazety Ahmad Zeidabadi Nalefa An-Tsesintany Rehefa Avy Nigadra Enin-Taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2015 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Center for Human Rights in Iran Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sivana, Zon'olombelona
Nalefa an-tsesintany taorian'ny namotsorana azy tamin'ny volana mey teo i Ahmad Zeidabadi . Sary nopihan'ny Fars News Agency, ary navoaka haely.
Nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ity lahatsoratra ity ary navoaka eto noho ny fiarahamiasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho Fanajana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Ahmad Zeidabadi, mpanao gazety iray nandany ny enina taonany tany am-ponja noho ny asany, dia nafindra tao an-tanàna'i Gonabad any avaratra atsinanan'i Iran tamin'ny 22 Mey hanombohany indray ny fandefasana an-tsesintany azony. Ny biraon'ny Fampanoavana tao Tehran no nampahafantatra tamin'ny fianakavian'i Zeidabadi tamin'ny faraparan'ny volana Mey fa ho alefa an-tsesintany any Gonabad izy raha vao votsotra ao amin'ny Fonjan'i Rajaee Shahr.
Tsy zavatra mpitranga izany fampiharana avy hatrany ny fandefasana any am-ponja taona maro toy ny atao amin'i Zeidabadi izany ary tena nahatohina indrindra ny fianakaviany, satria nieritreritra ny maro fa tsy ho ampiharana ny sazy fandefasana any am-ponja.
Loharanombaovao fantatra momba ity raharaha ity no nilaza tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena ho Fanajana ny Zon'Olombelona ao Iran fa efa nampahafatarin'ny Fitsaranany fianakaviany fa novaina ho roa taona ny fandefasana azy an-tsesintany [tsy mahazo mandia faritany] mandritra ny dimy taona. Tsy nambaran'ny fitsarana tamin'ny fomba ofisiany anefa ity didy vaovao ity.
Nisambotra an'i Zeidabali, izay sekretera jeneralin'ny Fikambanan'ny Mpianatra taloha (Advar) ny mpitsikilon'ny Mpiambina Revolisionera tamin'ny 12 jona 2009, ary namindra azy ao amin'ny Fari-Piambenana 2-A ao amin'ny Fonjan'i Evin. Nalefa teny amin'ny Fitsarana tamin'ny 23 Novambra 2009, ary voaheloka enin-taona an-tranomaizina sy dimy taona an-tsesintany ao Gonabad, ary tsy mahazo mandray anjara amin'ny sehatra sosialy sy politika intsony mandritra ny androm-piainany noho ny fanaovana “propagandy manohitra ny fitondrana,” “fivoriana sy fifandonana hanao rotaka taorian'ny fifidianana filoham-pirenena,” ary “fanevatevana ny Mpitarika Faratampony.”
Tamin'ny Febroary 2010 dia nafindra tao amin'ny Fonjan'i Rajaee Shahr tao Karaj, ivelan'i Tehran, izy sy ny gadra politika hafa ary taono nandaniany ny famonjana azy.
Amin'ny maha-mpanadihady ara-politika azy dia nanomboka tamin'ny asa fanaovan-gazety tao amin'ny Etela’at izay tamin'ny 1989, ary taona vitsivitsy mialoha ny nisamborana azy dia niasa tamin'ireo gazety reformista izy. Mpikambana ao amin'ny filakevi-pitantanan'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Iraniana ihany koa izy. Ny antony lehibe ntsarana azy tamin'ny 2009 dia ny taratasy misokatra nosoratany hoan'ny Mpitarika Faratampon'i Iran Ali Khamenei, nitsikera azy ho tsy ampy tamberin'andraikitra.
Araka ny didim-pitsarana, tsy maintsy nankany amin'ny biraon'ny governoran'i Gonabad mihitsy i Zeidabadi tenany. “Talohaloha teo, nisy manampahefana iray avy ao amin'ny fampanoavan'i Tehran nampahafantatra tamin'ny fianakavian'Atoa Zeidabadi ny fampiharana amin'ilay mpanao gazety ny didy andefasana azy an-tsesintany, saingy tsy nino izany ny fianakaviana, satria tsy nieritreritra ry zareo hoe mbola hanampy fampijaliana hafa taorian'ny famonjana enin-taona ireo manampahefana,” hoy ny loharanom-baovao.
Tao amin'ny pejy Facebook tamin'ny 19 Mey 2015 ny vadin'i Zeidabadi, Mahdieh Mohammadi Gorgani, no nanoratra hoe, “Niandry an'i Ahmad ho avotsotra izahay tamin'ny 21 Mey rehefa tany am-ponja nandritra ny enina taona, saingy ankehitriny ry zareo nilaza fa handefaazy an-tsesintany rehefa avy tany am-ponja. Mahatsiaro ho tena voageja tokoa izahay.”
Gadra politika ao Iran
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Charlie Rose , tamin'ny 28 avrily 2015 raha nanontaniana momba ireo mpanoratra gazety migadra ao Iran ny Minisitry ny raharaham-bahiny Javad Zarif, nilaza izy fa:
Tsy managadra olona amin'ny heviny izahay. manana drafitra ny governemanta hanatsarana sy hanamafisana ny zon'olombelona eto amin'ny firenena. Tahaka ny tokony ataon'ny governemanta rehetra. Ary mino aho fa manana adidy izahay amin'ny maha-governemanta hanao izay amin'ny vahoakantsika. Saingy ny olona mahavita heloka bevava, manitsakitsaka ny lalànan'ny firenena kosa tsy afa-miafina amin'ny maha-mpanao gazety azy na mahampikatroka politika azy. Mila manaraka ny lalàna ny olona.
Nefa raha nanontaniana amin'ny fisian'ny gadra politika ny mpikambana Parlemanta Ali Motahari tamin'ny fitsidihana ny Oniversiten'i Zanjan tamin'ny 12 may dia namaly toy izao izy:
Tsy nanana anjara tamin'ny hetsika 2009 ny gadra politika sasantsasany [hetsi-panoherana nanaraka ny fifidianana filoha nampisy saritaka tamin'io taona io], fa nigadra noho ny fananany fomba fieritreretana reformista fotsiny
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/02/71229/
 iranhumanrights.org : http://www.iranhumanrights.org/2015/05/ahmad-zeidabadi/
 Ali Motahari : http://www.isna.ir/fa/news/94022213118/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85